Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny tsara indrindra amin'ny indostria nomem-boninahitra tao amin'ny WTM London
WTM London dia nanome anarana ny World Travel Leaders tamin'ity taona ity, ny fankatoavana isan-taona ireo orinasa sy olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay nisy fiantraikany tsara tamin'ny faritra na sehatra iray manokana.
Nambara androany (1 Novambra) tao amin'ny WTM London 2021 ny mpandresy ny loka World Travel Leader elite.
Ny fanolorana mari-pankasitrahana dia azo jerena amin'ny fangatahana manomboka ny 1 Novambra ao amin'ny tranokalan'ny WTM London, miaraka amin'ireo mpandresy nambara tamin'ny tafatafa virtoaly.
Ny orinasa dia natolotry ny WTM Official Media Partners ho amin'ny loka, vondrona iray amin'ireo fikambanana media ara-barotra ara-barotra malaza eran-tany. Ireo manam-pahaizana momba ny indostria sy ny mpanatanteraka WTM dia nandinika ireo lahatsoratra mba hanapahana izay ho mpandresy.
Ny fepetra ho amin'ny fahombiazana no lohahevitry ny WTM London tamin'ity taona ity: Reconnect. Manangana indray. Manavao.
Ireo mpandresy dia avy amin'ny fikambanan'ny varotra sy ny indostrian'ny indostria ka hatramin'ny rojo hotely sy ny zotra fitsangatsanganana.
Ny mpandresy avy amin'ireo voatendry natolotry ny Canadian Travel Press - ny boky ara-barotra fitsangatsanganana be mpamaky indrindra any Canada - dia ny Association of Canadian Travel Agency (ACTA).
Nihetsiketsika haingana ny ACTA hanohanana ireo mpiasan'ny fitsangatsanganana rehefa nampihatra ny sasany amin'ireo fameperana faran'izay henjana indrindra eran'izao tontolo izao i Canada nandritra ny areti-mifindra.
Ny fikambanana dia niara-niasa tamin'ireo mpandray anjara hafa amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany mba hanentanana ny fanokafana indray ny sisintany.
Izy io koa dia nitaona sy nandresy ny fampielezan-keviny ho an'ny vaomiera mpandraharaha fitsangatsanganana mba ho voaro rehefa nandidy ny famerenan'ny mpanjifa ny governemanta kanadianina ho ampahany amin'ny fonosana fanampiana ara-bola ho an'ny zotram-piaramanidina kanadianina sy ny hetsika fitsidiny.
Ny orinasa mpitantana hotely Felix Hotels no mpandresy tamin'ireo voatendry natolotry ny L'Agenzia di Viaggi avy any Italia.
Naorin'ny mpandraharaha Sardiniana roa, Agostino Cicalò sy Paolo Manca, dia nanao ny voalohany tamin'ny Oktobra 2020 na dia eo aza ny areti-mifindra.
Manolotra hotely sy trano fonenana fito any amin'ny toerana fialan-tsasatra tadiavina any Sardinia izy izao.
Nisy fanentanana dokam-barotra natomboka tamin'ny volana Jona tany amin'ny firenena enina: UK, Alemaina, Holandy, Frantsa, Soisa ary Italia.
Ny mpandresy tamin'ireo voatendry natolotry ny Trav Talk India – gazetiboky vaovao momba ny varotra fitsangatsanganana any Azia Atsimo – dia ny Waxpol Hotels & Resorts.
Nanangana vondron'asa Covid izy io mba hanampiana ny ekipany hijanona ho voaro, hanome fidirana amin'ny fitsaboana raha ilaina, ary hanitarana fanohanana ara-bola fanampiny. Tsy nisy fandroahana na fanapahana karama.
Nanohana sekoly teo an-toerana ihany koa ny orinasa tamin'ny fanomezana toeram-pivoahana mitokana ho an'ny zazavavy; latabatra sy seza ho an'ny efitrano fianarana; trano famakiam-boky sy toeram-panatanjahantena; efijery misy fifandraisana amin'ny Internet ho an'ny fanabeazana nomerika; ary fitaovana filalaovana.
Ankoatr'izay, niara-niasa tamin'ny hafa tao amin'ny indostria izy io mba hamolavola torolàlana sy fiofanana momba ny Covid-19 ho an'ny trano fonenana, toby, trano fandraisam-bahiny ary hotely.
Ny mpandresy tamin'ireo voatendry natolotry ny Hosteltur dia ny Viajes El Corte Ingles, iray amin'ireo tambajotra lehibe indrindra amin'ny masoivoho fitsangatsanganana mifanatrika ao Espaina.
Nikatona avokoa na ny ankamaroan'ny masoivoho fitsangatsanganana nandritra ny fanakatonana, noho izany dia nihena saika 89% ny fidiram-bola.
Niodina tamin'ny fanolorana serivisy fantsona Omni izy io, namolavola fomba hanompoana ny mpanjifa an-tserasera sy an-telefaona.
Nitambatra tamin'ny masoivoho fitsangatsanganana an-tserasera Espaniola ihany koa izy io LogiTravel, nanangana orinasa iraisan'ny tranombarotra maherin'ny 500 sy mpiasa maherin'ny 5,000, “hamorona vondrona mpizahatany izay mametraka ny tenany ho mpitarika ny masoivoho fitsangatsanganana miteny espaniola”.
Ny masoivoho koa dia namolavola teknolojia mba hitantana tsara kokoa ny dia ara-barotra.
Richard Fain, Lehiben'ny Mpanatanteraka sy Filoha, Royal Caribbean Group, no mpandresy tamin'ireo voatendry natolotry ny Travel Weekly US.
Na dia noraran'ny governemanta nandritra ny herintaona mahery aza ny indostrian'ny fitsangantsanganana amerikana, dia nifandray tamin'ireo mpandraharaha mpitety faritany i Fain tamin'ny alàlan'ny andian-dahatsary manainga fanahy manokana, nalain'ny vadiny tao amin'ny zaridainany.
Nanome fampindramam-bola tsy misy zanabola mitentina 40 tapitrisa dolara ho an'ny masoivoho fitsangatsanganana ihany koa ilay goavambe cruise ary niara-niasa tamin'ny Norwegian Cruise Line Holdings mba hamoronana ny Healthy Sail Panel, vondrona manam-pahaizana momba ny fahasalamana sy ny fidiovana izay nanome tolo-kevitra 74 momba ny fomba hitohizan'ny fitsangantsanganana.
Ny mpandresy tamin'ireo voatendry natolotry ny Travel & Tourism News (TTN) Middle East dia i Shurooq, ny Sharjah Investment and Development Authority.
Tao anatin'ny roa taona lasa izay dia nanara-maso ny fahavitan'ny tetikasa maro izy satria nanova ny toekareny i Sharjah ary namolavola safidy fitsangatsanganana ara-tontolo iainana sy fitsangatsanganana.
Tafiditra ao anatin'ireo tetikasa ireo ny fanamboarana indray an'i Kalba ho toerana fizahan-tany ara-tontolo iainana; ary lalan'ny fitsangantsanganana ary Observatoire ao Khorfakkan; ary toeram-pialan-tsasatra vaovao antsoina hoe The Moon Retreat.
Ny sambo vaovao sy ny fahazoan-dàlana maharitra dia antony lehibe amin'ny fahombiazan'ny MSC Cruises, mpandresy avy amin'ireo voatendry natolotry ny TTG Media UK.
Natomboka nandritra ny areti-mifindra, ny MSC Virtuosa sy ny MSC Seaside dia nanome ny zotra fitsangatsanganana mba hitazonana ny fientanentanana manodidina ny marika ary hanao laharam-pahamehana ny hafatra maharitra.
Samy manana ny teknolojia hampihenana ny entona entona ireo sambo roa ireo; fampifandraisana herinaratra amin'ny morontsiraka, ahafahan'izy ireo mifandray amin'ny tambajotram-pamokarana herinaratra eo an-toerana mandritra ny seranana; ary ny fampandrosoana mahomby amin'ny angovo hanampiana ny MSC Cruises amin'ny tanjona fampihenana ny fanjifana solika 2.5% isan-taona.
Ny mpandresy tamin'ireo voatendry natolotry ny mpamoaka fitsangatsanganana Rosiana Tourbus dia ny Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi.
Ny toeram-pialan-tsasatra no toerana tsara indrindra hijerena ny Riviera Rosiana, manolotra fomba fijery ny ranomasina sy ny tendrombohitra avy amin'ny efitrano 508 sy villa enina.
Ao amin'ny valan-javaboary Olaimpika ary manana tora-pasika fasika manokana, ny hotely dia mandray hetsika ara-barotra ary koa ireo mpandeha miala voly.
Mampiroborobo ny fizahantany ara-tontolo iainana sy maharitra izy io, manohana ny fiarovana ny Ranomasina Mainty sy ny Tendrombohitra Caucasus.
Ny mpandresy tamin'ireo voatendry natolotr'i Mercado & Eventos any Brezila dia Bruno Wendling, Filohan'ny Talen'ny Fondation Tourisme Mato Grosso do Sul ary Filohan'ny Sekreteran'ny Fizahantany Breziliana (Fornatur).
Nangataka lalàna sy fanohanana ara-bola ireo mpanao politika izy mba hanampiana ny sehatry ny fizahantany.
Anisan'ny hetsika novolavolainy ny fanentanana antsoina hoe 'Tongasoa, fa manao saron-tava'; fiofanana momba ny vokatra vaovao sy vahaolana ara-teknolojia; ary ny marketing drive.
Ny mpandresy avy amin'ireo voatendry natolotry ny famoahana teknolojia B2B any UK, Travolution, dia sehatra fitantanana fitsangatsanganana manerantany TravelPerk, ho an'ny fampandrosoana ny TravelSafe API.
Izany dia ahafahan'ny mpanome fitsangatsanganana manome ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy momba ny famerana ny fitsangatsanganana Covid-19, ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny fitsangatsanganana, ny antontan-taratasy momba ny dia, ny haavon'ny fifindran'ny faritra, ny torolàlana eo an-toerana, ny fepetra fiarovana amin'ny fiaramanidina sy ny maro hafa.
Ny talen'ny WTM London, Simon Press, dia nilaza hoe:
“Mifandray isan'andro amin'ireo matihanina amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerana ny sehatra misy antsika ny tambajotra manerantany mpiara-miombon'antoka amin'ny haino aman-jery WTM. Ny fahaizan'izy ireo isam-paritra sy ny fifandraisany dia midika fa ireo mpandresy amin'ny World Travel Leaders dia tena misolo tena ny tsara indrindra amin'ny indostriantsika.
"Tena talanjona izahay tamin'ny fomba nanaovan'ireo orinasa mpitety faritany sy mpanatanteraka eran'izao tontolo izao haingana sy tamim-pahakingana tamin'ireo fanamby mbola tsy nisy toy ny areti-mifindra sy ny fomba nanehoan'izy ireo ny teny filamatra momba ny Reconnect. Manangana indray. Manaova fanavaozana.”